Ghostwriter Sayniska Kombiyuutarka Hadda waxaan qoraa shaqada Papernerds
Qorayaashayagu waxay leeyihiin aqoonta lagama maarmaanka u ah sayniska kombiyuutarka
Qalin jabinta ka dib, sayniska kombiyuutarka wuxuu bixiyaa fursado aad u tiro badan, laga bilaabo amniga adeegga dadweynaha ilaa shaqooyin faa'iido leh oo ka socda soo saaraha ama warshadaha amniga.
Ilaa heerkaan, dabcan, wax badan ayaa loo baahan yahay. Xisaabtu maahan tan kaliya ee caqabad weyn keenta, xitaa haddii ay u badan tahay inay tahay tan ugu baahida badan. Fikrado badan oo xisaabeed ayaa u baahan in la fahmo halka daraasadda inteeda kale aysan nasin. Waqtiga loo baahan yahay si aan macquul ahayn looma dhayalsan karo, waana sababta caawimaadda dibaddu faa'iido u leedahay. Aasaaska falanqaynta iyo aljebra gaar ahaan waxaa laga helaa mar labaad iyo mar dambe koorsada mana ka mid yihiin manhajka dugsiga.
Meelaha kale ee hoose ayaa sidoo kale aad uga fog waxa qeexaya internetka, iyo waxyaabo kale, ama muhiim u ah howlaha barnaamijyada dambe. Cilmiga kombiyuutarka teori ahaan waxaa muhiim ah in la fahmo aasaaska luqadaha barnaamijka laftiisa. Qaab dhismeedka iyo nooca ka shaqeynta macluumaadka waa la falanqeynayaa waxayna u taagan yihiin aasaas muhiim ah, laga soo bilaabo aragtida automaton ilaa caqliga iyo macnaha, waxaa jira maadooyin aad u tiro badan oo maaddooyinka aan ka sii yarayn doonin marxaladaha muhiimka ah ee imtixaannada iyo laylisyada.
Aasaas kale waa maamulka ganacsiga, oo aan inta badan la dhayalsan. Xisaabta iyo sayniska kombiyuutarka aragtida ahi waxay ku beertaa baqdin aad u badan, laakiin maamulka ganacsiga waxaa ka hor imanaya arrimo aan la aqoon oo aan la xiriirin mawduuca oo caqabad ku noqonaya caqligooda.
Marka la eego kakanaanta iyo shaqooyinka kala duwan ee daraasadaha sayniska kombiyuutarka, waxaa habboon in lagu daro khibrad dibadeed. Waxay noqon doontaa wax aad u dhib badan haddii shahaadada isku dhafan ee falanqaynta ama aragtida keydka keydka macluumaadka ay xumaato. Koorsadani markaa waa mid ka mid ah koorsooyinka sayniska dabiiciga ugu adag. Aad ayey u adagtahay in la maro waana daal badan. Ka waran haddii mid ama kan kale ee ka shaqeeya barnaamijyada la siiyo khibrad-yaqaan ruug-caddaa ah?
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan leh aqoontaanna waxay ku abuuri karaan waxyaabo badan oo aan adiga lagaa fikiri karin muddo gaaban. Qorayaasheena ayaa ku faraxsan inay qoraan qoraaladaada sayniska. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waan duubi doonnaa hawshaada isla markaana waan ku siin doonnaa isla markiiba dalab by.
Qalin-jabiyaha ahaan, waad ka shaqeyn kartaa meel kasta oo kombiyuutarro lagu isticmaalo. Tani waa lama huraan maalmahan. Tusaale ahaan, waxaad u shaqeyn kartaa sidii nidaam ku takhasusay IT, barnaamij-yaqaan, khabiir ku ah dhamaadka-dhamaadka ama dhamaadka-hore, ama takhasus internet.
Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada shahaadada bachelor, shahaadada Masterka oder Maqalka. Qorayaashayagu waxay qoraan qoraaladaada. Waxaad sidoo kale na siin kartaa mid dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheennu waxay kaa caawin doonaan abuurista iyo su'aalahaaga.
Mawduucyada soo socda ayaa laga ilaaliyaa daraasadahaaga sayniska kombiyuutarka inta lagu guda jiro semestarka, maadaama ay leeyihiin heerar aad u sarreeya oo fashilaad ah oo badanaa u horseedaya ka-tagitaan:
Qaab dhismeedka xogta
Isdhexgalka ka dhexeeya aadanaha iyo kombiyuutarada
Sayniska kombiyuutarka teori
Ka dib markay ardaydu si guul leh u dhammaystiraan waxbarashadooda maaddadooda, waxaad ku jirtaa baahi weyn. Shirkad kastaa waxay u baahan tahay IT si ay uga baaraandegto xogta ama ay ugu shaqeyso nidaamka xisaabinta. IT sidoo kale baahi weyn ayaa looga qabaa isbitaalada, maadaama ay jiraan dhismayaal badan oo IT ah oo u baahan in la wanaajiyo oo la ballaariyo. Dabcan, ka qalinjabinta koorsada, waxaad sidoo kale ku shaqeyn kartaa aqoontaada sida qof iskood u shaqeysta oo sidaas darteed aad u kasbato si aad u wanaagsan. Aqoontaada waxaad sidoo kale kaheli kartaa shirkad latalin IT ah ama wakaaladda IT. Albaabo badan ayaa kuu furan shaqadaada.
Cilmigaaga Shaqada guriga, shahaadada bachelor, shahaadada Masterka oder Qoraalka PhD waxaad naga heli kartaa inaan kuu soo qorno. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor. Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona. Sidoo kale waa inaad haysataa qoraalkaaga tacliimeed ee uu qoro ghostwriter tayada shaqadaada.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Markaad qalin jabisid waxaa jira fursado badan oo sidaada oo kale ah oo sayniska ah sii wad inaad xirfad yeelato awoodo. Waxaa jira shaqo-bixiyeyaal badan oo suurtagal ah adiga qalin-jabiya ahaan Meelaha caadiga ah ee shaqada ee qalin-jabiyaha waa, tusaale ahaan:
Qoraalka ghost ee sayniska kombiyuutarka
Taasi sidoo kale ganacsiga Xogta iyo Mathematikum Ardayda ayaa sii kordheysa adeegsiga adeeggan. Sidaa darteed amar Shaqadaadii dhamaysay hada! Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Sayniska kombiyuutarka ee nidaamka horumarinta nidaamka
Shirkadaha, horumarinta nidaamka waa qeyb aad muhiim ugu ah faa'iidada shaqadooda. Nidaam hufan ayaad ku yareyn kartaa tirada shaqaalaha oo sidaas ayaad kordhin kartaa faa'iidada. Iibinta ayaa sidoo kale si aad ah kor loogu qaadi karaa shaqaale kasta. Marka waa xirfad weyn oo muhiim u ah shirkadaha haddii ay horumarin karaan nidaamyada.
Sayniska kombiyuutarka ee nolosha xirfadeed
Waxaa jira jagooyin badan oo IT ah oo lagu xayeysiiyo nolosha xirfadeed. Sababta tani ayaa ah in shirkadaha waaweyn ee maanta ay u badan yihiin shirkadaha waaweyn ee IT sida Apple, Amazon, Facebook, Microsoft ama Google. Waxay si aad ah u qaabeeyaan dhaqaalaha hadda jira waxayna keenaan fikrado cusub. Dhamaan shirkadahaani asal ahaan waa shirkado IT aad u takhasus badan. Waxbarashadaada waxaad u jiheysaa jihada saxda ah. Wax ka samee! Waan kaa caawin doonaa erfolg keen!
Aagga IT ee shirkadaha ganacsiga
Faa'iidada shirkadeed waxaa lagu qiyaasi karaa tirooyin badan oo muhiim ah sida ROI iyo EBIT. Halkan, sidoo kale, tikniyoolajiyadda macluumaadka waxay gacan ka geysaneysaa go'aaminta tirooyinka muhiimka ah ee la xiriira, maaddaama diiwaannada xogta ay tahay in lagu qiimeeyo tan. Tani waa waqti aad u badan. Si aad waqti ugu hesho waxyaalahan muhiimka ah, qaado oo keliya Kontakt anaga. Waxaan kuu xallinaynaa dhibaatada adiga!
Hubinta tayada ee qaybta IT-ga